Fahasamihafana eo amin'ny tamba-jotra 4G sy 5G | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny tamba-jotra 4G sy 5G | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Teknolojia / Fifandraisana / Fahasamihafana eo amin'ny tambajotra 4G sy 5G
Fahasamihafana eo amin'ny tamba-jotra 4G sy 5G
4 Febroary 2011 Narotsak'i Andrew
Tambajotra 4G vs 5G
4G sy 5G dia samy teknolojia fidirana an-tariby finday manolotra haingam-pandeha Ethernet amin'ny fitaovana finday hiaina ny serivisy fitifirana telo heny. 4G amin'izao fotoana izao dia aparitaka amin'ny firenena maro any Eropa sy Amerika Avaratra. LTE sy WiMAX dia teknolojia roa samihafa hahatratrarana ny hafainganam-pandeha voafaritra 4G. Ny 5G kosa dia foto-kevitra ihany fa tsy voafaritra amin'ny fomba ofisialy.
5G (tamba-jotra Generation fahadimy)
5G dia tsy voafaritra amin'ny fomba ofisialy na teknolojia fa ny teknolojia dia afaka manome ny hafainganam-pandeha mihoatra ny 4G ho 5G. Heverina fa ho vita amin'ny toerana hafa amin'ny taona 2012 na 2013. na ITU-R. Ny maodely 5G mety dia tokony handraisana ireo fanamby ary handraisana ireo fararano fohy amin'ny traikefa 4G Technology sy 4G. Ny fahafantarana ny zavatra ilaina sy ny fampiasana 5G dia azo atsangana raha vantany vao vita ny traikefa 4G. Arak'izany, ny hevitra 5G mahazatra dia hatsangana amin'ny toerana manodidina ny 2013-2015. Ny hafainganam-pandeha andrasana dia mety ho Gigabit Ethernet marobe. Ity teknolojia ity dia hampiasaina indrindra amin'ny tambajotram-pifandraisan-davitra fa tsy ny fidiran'ny mpampiasa farany.
Ny fifantohan'ny tsirairay izao dia nivadika ho 4G noho ny tahan'ny tahiry. Amin'ny serasera haingam-pandeha haingam-pandeha dia manome 100 Mbit / s (Toy ny fiaran-dalamby na fiara) ary ny fifandraisana ambany amin'ny fivezivezena na ny fidirana raikitra dia mety ho 1 Gbit / s. Ity dia revolisiona lehibe amin'ny teknolojia fidirana tsy misy tariby.
Mitovy be amin'ny fahazoana fifandraisana LAN na Gigabit Ethernet amin'ny finday.
4G dia manome ny serasera IP rehetra miaraka amin'ny fidirana haingam-pandeha amin'ny telefaona finday, tablette, solosaina finday ary fitaovana finday maranitra rehetra. Raha miteny ara-teôria ity haingam-pandeha fidirana 4G ity dia mihoatra lavitra noho ny teknolojia Cable na DSL amin'ny heviny fa ny 4G dia haingana kokoa noho ny ADSL, ADSL2 na ADSL2 +.
Vantany vao natomboka ny 4G ary raha manana farafaharatsiny 54 Mbits / s (tranga ratsy indrindra) ianao amin'ny telefaona finday na takelaka misy anao dia azonao atao ny mihazakazaka fampiharana Internet tahaka ny ataonao amin'ny solosaina birao. Ohatra, afaka mihazakazaka Skype, YouTube, fampiharana IP TV ianao, Video amin'ny fangatahana, mpividy VoIP ary maro hafa. Raha manana mpanjifa VoIP napetraka ao amin'ny fitaovanao ianao dia afaka miantso antso VoIP amin'ny findainao. Hamono ny tsenan'ny feo finday ato ho ato izy ity. Mandritra izany fotoana izany dia afaka misoratra amina nomerao eo an-toerana amin'ny mpanjifanao VoIP finday ianao ary manomboka mahazo antso amin'ny findainao amin'ny alàlan'ny IP. Ohatra, raha mipetraka any New York ianao dia tsy mila mahazo isa NY fa afaka manoratra numéro namboarina Toronto amin'ny findainao amin'ny alàlan'ny mpanjifa VoIP. Na aiza na aiza alehanao ao anatin'ny fandrakofana 4G na faritra Wi-Fi dia azonao atao ny mandray antso amin'ny Nomerao Toronto. (Na ianao aza dia afaka misoratra anarana amin'ny isa soisa ary mipetraka any New York).
Afaka mampiasa antso an-tsary amin'ny alàlan'ny IP ianao ary afaka mifanatrika mivantana rehefa mandeha. Afaka miantso an-telefaona maimaimpoana ho an'ny vadinao, sakaizanao ianao, na koa mety hanana fivorian'ny kaonferansa mandritra ny dia ataonao raha mifandray amin'ny 4G ianao.
Na dia efa natomboka tany Eoropa sy Amerika Avaratra aza ny 4G (Ny sasany amin'ireo mpamatsy dia Telnor, Tele2, Telia any Eropa ary Verizon, Sprint any Etazonia) dia mbola eo am-pivoarana io. 4G, ankoatry ny taham-pahalalana 100 Mbits / s ho an'ny mpanjifa mihetsika ary 1GB ho an'ny mpampiasa mijanona dia antenaina ihany koa ny hahazo kalitao bebe kokoa amin'ny serivisy hampiatoana ny mpampiasa nefa tsy hametraka signal ary hamela ny roaming interaktifation manerantany.
Fahasamihafana eo amin'ny 5G sy 4G
(1) 4G dia manolotra teorika manakaiky kokoa ny Gigabit Ethernet fa ny mpampiasa kosa manantena hafainganana Gigabit maro avy amin'ny 5G.
(2) 4G dia ampiasaina amin'ny Backhauling Networks ary koa ny tamba-jotra fidirana ho an'ny mpampiasa fa ny mpampiasa kosa manantena ny 5G ho tambajotra hazondamosina backhauling.
Fahasamihafana eo anelanelan'ny Near Field Communication (NFC) sy Bluetooth Fahasamihafana eo amin'ny 3G sy Telstra manaraka G
Filed Under: Communication Tagged With: 4G , 5G , Networks Generation Fifth , Generation Generation Fahefatra
Fahasamihafana eo ambonin'ny tsipika sy ambanin'ny tsipika
Fahasamihafana eo amin'ny Blunt, Joint ary Spliff
Fahasamihafana eo amin'ny asidra Fenofibrate sy Fenofibric
Fahasamihafana eo amin'ny SBI sy ICICI
Fahasamihafana eo amin'ny fanadiovana sy ny fametrahana